Sawir gacmeed & fingure goynta wadajir Factory - Shiinaha Saw daab & farta goy saaraha wadaagayaasha, shirkado cusub
Waxyaabaha yaryar ee caajiska ah
carbide Hinge bits caajis
Daloolin Dowel (Goos gooska daloolinta Brade)
Iyada oo loo maro carbide carbide
Caleemaha wareejinta carbide iyo mindiyo qorsheeye
Mindiyaha Carbide ee wax lagu muujiyo
Mindiyo Qorsheeyaha Carbide
Middiyo la beddeli karo
Carbide Spur iyo mindiyo gooyn ah
Mindiyaha wareega Carbide
Sawir gacmeed & gooye fingure wadajir ah
Carbide farta goy ah ee wadajirka alwaax
PCD waxay aragtay daab iyo TCT daab aragtay
PCD daab daab daab
TCT daab daab daab
HAN-C TOOLS waxay leedahay 10 sano oo khibrad ah naqshadeynta & soosaarida hal abuurka ah waxay ka dhigeysaa alwaaxaaga mid aad u fudud！
Tababbarka dowel adag ee carbide ...
HW dowel oo leh 3 cutt ...
Miisaska PCD ee Sawirada
Finger magaabay wiil for ...
TCT gaballo caajis ah
4 Futada waxqabadka sare t ...
4 futada dowel warshad d ...
Farta goynta wadajirka ah ee dhismaha-160 × 60-4T
4 Ilkaha carbide tungsten, maaddada jirka waa 65Mn, HRC40-42;
Ku habboon processing: alwaax qurmay, nijaasta, ciddiyaha iyo waxqabadka kale ee wanaagsan
TCT daab jeex jeex jeex jeex jeex ah daab qoryaha daab
TCT Hal jeex jeexan Saw Blade waxaa loogu talagalay qoryaha adag ama jarista geesaha ka hor inta aan la is uruurin. Heerka tayada dhammaadka Super ilaa qoryaha jilicsan iyo qoryaha adag. Taas oo leh qaab ilig gaar ah oo awood u siinaysa calaamadda mindi ku dhow dhammaadka jarista bilaashka ah, ee ku habboon Edge Trimmer, mashiinka miinshaar la jeexjeexay, moulder iyo miiska miiska iwm. Qalabka hormarinta iyo tikniyoolajiyadda ayaa taageera nolosha goynta dheer.
Wareegto Hal dhibic ah ayaa aragtay Blade loogu talagalay guddiga dahaarka leh
Mindida miinshaarta waxaa loo adeegsadaa goynta gogosha ah ee iskudhafka ah ee iskudhafka ah ee looxyada cad iyo kuwa xarkaha leh (sida qubka, MDF iyo HDF). Astaanta ilkaha ee la hagaajiyay waxay hagaajineysaa tayada goynta, xasilloonida ayaa xoog leh, madaxa wax gooyaa waa mid aad u adkeysi badan isla markaana goynta ayaa ka xasilloon.
TCT Panel Qiimeynta Blades Sawir Wareegsan Loogu talagalay guddiga dahaadhay
PCD lamello magaabay qoryaha
Mashiinkaani waa la bixin karaa si uu ugu haboonaado mashiinka yar-yar ee gacanta lagu hayo Lamello waxaana sidoo kale lagu dhejin karaa arbor si loogu isticmaalo mashiinka CNC. Waxaa lagugula taliyay inaad jeexjeexdo geesaha iyo kalagoysyada dhaadheer ee alwaaxa adag, MDF-da laxiriira iyo kuwa lakulmay ee nidaamka P taangiga.
PCD Sawirada Blades waxay ka samaysan yihiin walxaha PCD iyo saxan bir ah, iyada oo loo marayo goynta leysarka, brazing, shiida iyo hababka wax soo saarka kale. Waxaa loo isticmaalaa jarista lakabka lakabka lakabka, guddiga masiirka dhexdhexaadka ah, guddiga wareegga korantada, guddiga dab-demiska, plywood iyo qalab kale.
Mashiinnada: Miis miinshaar, dogob iwm.
E1-2-1006, Xarunta Caalamiga ah, No.1700 Tianfu Avenue, Degmada Wuhou, Chengdu, Shiinaha